Indoda ka-Aquarius kubuLwalamano: Qonda kwaye umgcine ethandweni - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda ka-Aquarius kubuLwalamano: Qonda kwaye umgcine ethandweni
Indoda ka-Aquarius kubuLwalamano: Qonda kwaye umgcine ethandweni
Indoda ka-Aquarius kunzima kakhulu ukuba umntu ajongane nayo kubudlelwane ngenxa yovakalelo lwendalo. Ayisiyo yokuba uyifumana ngokulula itafile, kodwa unomdla wokuqonda uhlaselo oluhlaselayo kwiintetho ezininzi ezimsulwa.
12/23 uphawu lweenkwenkwezi
Unobuntu kwaye unqwenela ukuma neqabane lakhe. Uya kuthatha ixesha lakhe ukubonisa iimvakalelo zakhe zokwenyani.
Nje ukuba azibophelele ngokwenyani, uthembekile ngokupheleleyo. Ubeka ixabiso elincinci kakhulu kwiimvakalelo zakhe.
Uya kulenza iqabane lakhe likhululeke kwaye likhululeke. Unokuba ndlongondlongo xa engathathelwa ngqalelo.
Akakholelwa nje malunga nokuba nabani na unelungelo lokumazi ngokunzulu, yiyo loo nto ehlukane kwaye ekude. Misela nje imida ethile kunye nokulindela kwasekuqaleni ukuya naye ngendlela efanelekileyo.
Lo mfo uneemvakalelo ezininzi afuna ukuziveza, ukwenza umthandi wakhe aqonde indlela amthanda ngayo, kodwa yinto angayenzi rhoqo. Ikwayinyani ukuba uhlala emhle kwaye akakuhoyi ukubaluleka kweemvakalelo ngokubanzi.
Akayi kulandela imigaqo eqhelekileyo
Indoda ka-Aquarius isenokungaze ifune ukutywina isivumelwano kwaye itshate neqabane layo kuba ifuna ukuphila ubomi obukhululekileyo, ngaphandle kwezithembiso ezinzulu.
Nokuba uhamba kunye naye angabeka iingxaki ukuba usemncinci apho afuna ukuzalisekisa iminqweno yakhe kuqala. Uyakholelwa ukuba kungcono ngale ndlela kubo bobabini, ukuba kuya kuzisa kuphela izinto ezilungileyo kwixesha elizayo.
Kodwa kumfazi onovakalelo nothando ofuna ukuba naloo mvakalelo yokuba lilungu, yimvakalelo ekrakra. Unoxanduva kakhulu kwaye unemfesane, nangona kunjalo, akazange azithobe asezantsi njengokukhohlisa okanye abe sisisulu.
Uzinikele, uthembekile kwaye ufuna ukugcina ubudlelwane obunobuhlobo nomntu nasemva kokuba eqhawule umtshato.
Uyinzalelwane ethandekayo engafuni kuphila ubomi bayo ilawulwa yimithetho angayiqondiyo okanye afuna ukuyilandela. Kungenxa yoko le nto ehlala evukela imeko, azenzele eyakhe imithetho, aphile ubomi ngendlela abona ngayo.
Ke, nantoni na afuna ukuyenza, uya kuyenza ngaphandle kokucela imvume nakubani na. Ugcwele imibono emitsha kunye namandla okuzama izinto ezintsha, ukuzama kwihlabathi.
Nangona kunjalo, indoda ka-Aquarius iyakhawuleza ukukruquka yimisebenzi emitsha, kwaye le yeyona bane yakhe, buqu kunye nothando. Kufuneka akhuthazwe ukuze aqhubeke enomdla.
Ngaphandle kokutshintsha nokungaqiniseki kubhalansi lweemvakalelo zakhe, usiya kulonwabo uye kubuhlungu kumzuzwana owahluliweyo, indoda ka-Aquarius ayinakuvuma ngokulula ukuba ibotshelelwe umntu ngokusisigxina.
Kuya kuthatha ukukholisa kunye nokulukuhla ukuze umenze acele isandla sakho emtshatweni. Uya kuhlala ekukhathalela kwaye akubeke embindini wengqwalaselo yakhe nangaphambi kokuba ucinge ngokuqhubela phambili. Nje ukuba enze eso sigqibo, yazi ukuba kukuzibophelela ebomini.
Kwinxalenye yokuqala yobomi bakhe, uya kufuna ukuzama okuninzi, ukuba namava ehlabathi kungabikho mntu ungaphambi kwakhe.
Ngokumalunga nobudlelwane bakhe, ngekhe kubekho nabakudala bekhona ekuqaleni. Endaweni yokuba indoda yakwa-Aquarius izakuzibandakanya kwii-stand-night-stand ezininzi, ukulungiselela nje ukuzonwabisa, umtsalane ngokwasemzimbeni kunye nolwaneliseko lweziyolo ezithile.
Nje ukuba angene kwi-synch kunye neemvakalelo zakhe kwaye athathele ingqalelo ubunzulu beemvakalelo zakhe, uya kuqala ukucinga ngokungena nzulu kunoko, malunga nokufumana elona bhinqa lilungileyo anokuhlala nalo.
Scorpio eyindoda capricorn ukuhambelana kwabasetyhini
Okwangoku, usenokuba waqala ngokuzithandela, esasaza inyaniso ayifumeneyo.
Ungumbono osoloko equlunqa izicwangciso kunye nemibono ngekamva, ezama ukuzisa inguquko, ukufumanisa umdlalo-ukutshintsha kwihlabathi.
Kungenxa yoko le nto ekufumanisa kunzima ukugxila kwiziganeko ezikhoyo. Kananjalo unokuba nomtsalane ngenxa yoko, enganikeli ngqalelo yaneleyo kwiimvakalelo zakhe, ehlala ebandakanyeka kubudlelwane obuyityhefu okanye obungahambelaniyo obudlala ngexesha lakhe.
Uyamfuna… kodwa umgcina njani?
Isicwangciso sobuchule bakhe asinakulibaziseka kwaye into yokugqibela afuna ukuyibona kukutshatyalaliswa liqabane elingalunganga.
Kananjalo, xa ezibophelela kubudlelwane ngentliziyo yakhe yonke, unokuqiniseka ukuba sisigqibo esomeleleyo kwicala lakhe, into ekudala eyicinga.
Ingxaki ekuphela kwayo ekufumaneni indoda ye-Aquarius kukwazi ukuba igcinwe njani apho kuba ukudibana nenye akunzima kakhulu. Aba bemi bemihlali bahlala kakhulu kwaye banxibelelana kwasekuqaleni, baya apho kumnandi kugungqisa izitrato.
Kuya kufuneka uyonyuse ngokwenene into yakho yolonwabo, ezo jokes zekinky kwaye ngokuqinisekileyo kufuneka wenze ngobukrelekrele.
Uyayithanda loo nto kakhulu, iqabane elinokumfanisa ngokwasengqondweni, onokujongana naye ngokulinganayo kwincoko. Soloko uza nemibono emitsha yokunonga izinto, ukuvusa umdla wakhe, nakubudlelwane.
Yazi ukuba xa sele enze ukhetho lokuba kunye nawe, ukuzibophelela kubudlelwane obude, uyakukubandakanya kwizicwangciso zakhe zexesha elizayo, yindlela azimisele ngayo kwaye azinikele ngayo.
Ngalo lonke ixesha hlala naye xa efuna ukutshintsha indlela yesiqhelo, enze into entsha. Oku kuya kumkhuthaza kakhulu. Kananjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ngumntu oqiqayo nothembekileyo.
Iikhonsepthi zesiko lomtshato, umphefumlo okanye iqabane lobomi alinangqondo kwaphela, nditsho nakulo mntu u-Aquarius othandweni. Ke musa ukulindela ukuba angathandana okanye afune ukuthandwa kwezi zinto.
Ukuba uya kuzama ukumbophelela kule mithetho angayiqondiyo okanye ayamkele, iya kukhokelela kwintlekele. Uyakonwaba, angoneliseki kwaye ekugqibeleni athambekele ekuqhawuleni ubudlelwane emva kwexesha.
mars kwiscorpio umntu othandweni
Akanakuze abe nezinto okanye abenomona kuba uyayiqonda intsingiselo yenkululeko nokuzimela. Nangona kunjalo, ngengqondo efanayo, kuya kuba lula kakhulu ukuhlala kunye naye kuba uyaqonda kakhulu kwaye akanazo iimfuno ezininzi.
Wenza into yakhe, wenza eyakho, kwaye naxa nisenza into kunye, uyakwamkela ukusilela, iimpazamo, njalo njalo.
Iimpawu zoMntu weAquarius othandweni: Ukusuka kwi-Empathic ukuya kwi-Independent Seer
Ukuhambelana kwe-Aquarius kuthando
Iimpawu zobudlelwane be-Aquarius kunye neengcebiso zothando
Abalingani baka-Aquarius Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Umona weePisces: Into ekufuneka uyazi
Indoda yaseCapricorn kunye noMfazi oLungeleleneyo ixesha elide
bathanda ntoni amadoda gemini ebhedini
Indoda yasemanzini kunye nentombi
pisces indoda gemini umtshato womfazi
Uphawu lweZodiac ngoMeyi 14
uyifumana njani ibhinqa laseari ebhedini
abantu abazalwe ngo-septemba 1